#Ergada ka qaybgaleysa Shirka Dib u heshinsiinta Galmudug oo Dhuusamareeb ku wajahan - Get Latest News From Horn of Africa
#Ergada ka qaybgaleysa Shirka Dib u heshinsiinta Galmudug oo Dhuusamareeb ku wajahan
Guddiga dib u heshiinta Galmudug ayaa wado abaabul lagu soo dhaweynayo wufuud u badan Madax dhaqameed oo ku wajahan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug.
Xubnaha Guddiga oo shalay soo saaray habraaca shirka dib u heshiinta oo shan qodob ka kooban waxaa kamid ahaa, in maanta oo ay ku beegan tahay 14-ka August Ergooyinka Beelaha ay bilaabaan tagista Dhuusamareeb.
Waqti ahaan waxaa lagu wargeliyay Odoyaasha dhaqanka in aysan dib ugu dhicin 16-ka Bishaan oo ah Maalin kahor waqtiga gogasha dib u heshiinta ay furmeyso.
Odoyaasha dhaqanka iyo waxgaradka Magaalada Dhuusamareeb oo kulan yeeshay waxa ay ku dhawaaqeen in ay diyaar u yihiin soo dhaweynta Madax dhaqameedyada la filayo in ay maanta qaarkood tagaan Xarunta Galmudug.
Waxa ay tilmaameen in ay gacmo furan kusoo dhaweynayaan Ergada kala mataleysa 11-ka Beel ee qaybsaneysa Xildhibaanada iyo Xilalka kale ee Galmudug.
Shirkaan oo markii hore qorshihiisu ahaa 5-tii bishaan ayaa dib u dhacay labo sababood oo kala ah, aaskii DuqiI Muqdisho AUN Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo Maalmihii Ciidda ee Todobaadkaan.
Guddiga ayaa isku raacay in loo badalo 17-ka bishaan, si ay Odoyaasha dhaqanka u helaan waqti ku filan oo ay isugu diyaariyaan ka qaybgalka Gogosha Dhuusamareeb.